Water Soluble – Page2– Moe Ah San
“Vit E+ Selenium” အဓိကပစ္စည်း ၂ မျိုး နှင့်အတူ Organic acid salt နှစ်မျိုးနှင့် Nutritional Emulsifier (PEGR) တို့ပါဖြည့်စွက်ပေးထား ပါသည်။
(၁) Vit E ၏ Antioxidant (ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်း)ကို အဓိက အသုံးချရန် ရည်ရွယ်၍
ထိုဂုဏ်သတ္တိကို ပိုမိုအားကောင်းစေနိုင်သော အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ပစ္စည်းများဖြင့်
(၂) တိရစ္ဆာန်ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်မားရေး၊ ကာကွယ်ဆေးအောင်နှုန်း မြင့်မားရေးနှင့်
မျိုးပွားစွမ်းရည် တိုးတက်ရေးတို့အတွက် သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
ကြက် - 0.5 - 1 ml/Lit drinking water
သိုး၊ ဆိတ်၊ နွား - 0.5 - 1ml/1kg body weight
Colistin Sulfate ဆေး 5,000,000 IU/ml ပါဝင်သည်။
(၁) Gram (-ve) ပိုးတို့အားသတ်နိုင်သော narrow spectrum Antibiotic ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Ecoil ပိုးတို့အပေါ် "resistance" ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမားမပေါ်သေးသော "Gut Active" အစာလမ်းကြောင်း ရောဂါထိန်းချုပ်ဆေးအဖြစ် အားကိုးနိုင်ပါသည်။
(၂) Doxycycline, Lincomycin နှင့် တွဲဖက်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် "Systemic Effect" ကို
Poultry - (15ml/Ton body weight) - (3-5 days)
Others - (0.2ml/10kg) body weight -(3-5) days
Ivermectin 1 mg နှင့် Excipient q.s. 100 ml တို့ပါဝင်သည်။
* 1ml Promectine Oral / 25 Kg Body Weight နှုန်းသုံးရန်။
* ဆေးမတိုက်မီ (ကာကွယ်ဆေး မတိုက်မီကဲ့သို့) ရေ ၂ နာရီ ဖြတ်ထားပါ။
* ကပ်ပါးတို့၏ "Life Cycle" အရ Layer Replacement Stock တို့အား
(၁) သံချရုံသာ ရည်ရွယ်လျှင် ပထမအကြိမ် ဆေး(၁)ရက်- နောက် ၁၅ ရက်ခြား၍ ဒုတိယအကြိမ် ဆေး(၁)ရက်တိုက်ပါ (ပေါင်း ၁ ရက် - ၂ ကြိမ်)။
(၂) သန်း၊ လှေး၊ ကြမ်းပိုးအတွက် ပထမအကြိမ် ဆေး၂ ရက်- နောက် ၁၅ ရက်ခြား၍ ဒုတိယအကြိမ်
ဆေး ၂ ရက်တိုက်ပါ (ပေါင်း ၂ ရက် - ၂ ကြိမ်)။
(၃) Laying Quarter/cage မပို့မီ (10-14) Wk ၌ ၂ ရက်ဆက်တိုက်ပါ။
(၄) Beetles & Fly Control အတွက် အခြေအနေအရ အကြိမ်ကြိမ်တိုက်ပါ။
ဥနှုန်း၊ ဥအလေးချိန်ကို မထိခိုက်စေပါ။
ထုတ်ပိုးပုံ - ၁၀၀ မီလီလီတာ နှင့် ၁ လီတာဘူး
Fat soluble Vitamin ၃ မျိုးနှင့် (AD3E) တို့ပါဝင်သည်။
(၁) (AD3E) ဆီပျော် ဗီတာမင်တို့မှာ လိုအပ်ချက်အတိုင်း အစာမှတဆင့် ဖြည့်စွက်ပေးထားသည့်တိုင်အောင်
အကျိုးရလာဒ်သေချာမှု၌ "အစိုးမရ" ဘဲ ဖြစ်တက်သောသဘောရှိပါသည်။
(၂) အစာတွင်ပါရှိလာသည့် ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ အက်စစ်ဓာတ်များနှင့် အရည်အသွေးမမီသော "ဆီ" အာဟာရများ သုံးစွဲထားမှုတို့က (AD3E) တို့၏ ကံကြမ္မာကို လွှမ်းမိုးနေလိမ့်မည် ဖြစ်ပေသည်။
(၃) အကယ်၍ သင့်တိရစ္ဆာန်၌ (AD3E) ချို့တဲ့မှု၏ ဆိုးကျိုးလက္ခဏာများဖြစ်သည့်
ခုခံအားကျဆင်းမှု၊ အရိုးနှင့် ဥခွံပြဿနာ၊ မျိုးပွားစွမ်းရည်နိမ့်ကျမှုများ ကြုံတွေ့လာပါက
Poultry - (0.5 to 1 ml)/Lit of drinking water - 3-5 days
Others - (0.5 to 1 ml)/10kg body weight - 3-5 days
Vitamin + Aminoacid မျိုးစုံပါဝင်သည်။
(၁) အစာ၌ "Aminoacid ဖြည့်စွက်မှု" အချိုးအစား အလွဲအမှားရှိလျင် ပြန်လည်ညှိနိုင်းပေးစေရေးအတွက် "Essential and Non essential" အမိုင်နိုအက်စစ်အားလုံးကို ရေမှတဆင့် ဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
(၂) Stress condition ဒဏ်ဖိစီးမှုကို အခြေခံသော တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်
Poultry - (0.5 - 1 gm/Lit) of drinking water, 4-8 days
Others - (1 gm/Lit) of drinking water, 3-5 days
Enrofloxacin 100 mg နှင့် Excipient q.s. 1 ml တို့ပါဝင်သည်။
အစာလမ်းကြောင်း/အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါ အားလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
0.5 ml/Lit နှုန်းဖြင့် သောက်ရေ (3-5) Days တိုက်ပါ။
ထုတ်ပိုးပုံ - ၁၀၀ မီလီလီတာ နှင့် ၁လီတာဘူး
Vitamin (၁၀)မျိုး နှင့် Mineral (၈)မျိုး ပါဝင်သည်။
(၁) စီးပွားဖြစ်တိရစ္ဆာန်တို့၏ "ဗီတာမင်၊ မင်နရယ်" လိုအပ်ချက်ကို အစာ (Feed route) တစ်ဖက်တည်းကို အားကိုးခြင်းမှာပြည့်စုံကုန်လုံပြီ" ဟု မဆိုနိုင်သဖြင့် သောက်ရေမှတစ်ဆင့် (Safety margin) သဘော ဖြည့်စွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
(၂) အစာမှတဆင့် (ဗီတာမင်၊ မင်နရယ်) ပံ့ပိုးမှု ပမာဏမှာ (maintanance & production) တို့အတွက် လုံလောက်ကောင်းလုံလောက်နိုင်သော်လည်း (Resistance & Immunology) တို့အတွက်မှာမူ လုံးဝကာမိနိုင်ဖွယ် မရှိပါသဖြင့် ရေမှတဆင့် ထပ်လောင်းဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရေတွင် - 1 gm/2 Lit နှုန်းဖြင့် တိုက်ပါ။
အစာတွင် -2kg/ ton နှုန်းဖြင့် သုံးပါ။
Doxinyl – 10%
Doxinyl - 10%
Doxycycline 100 mg/ml ပါဝင်သည်။
(၁) Doxycycline ဆေးအမှုန့်နှင့် အာနိသင်ဆင်တူမည်ဖြစ်သော်လည်း "ရေဖျော်ဆေး" ဖြစ်၍ အသုံးပြုရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူပြီး အစွမ်းပြချိန်မြန်ပါသည်။
(0.5 - 1 ml)/Lit drinking water, (3 to 5) days.
Vitamin ၁၂ မျိုး + Amino ၁၈ မျိုးပါ ကြက်ငယ်သီးသန့်သုံး (Age Specific Formular) အားဖြည့်ဆေးရည်
(Oral Solution) ဖြစ်ပါသည်။
From newborn to post brooding အရွယ် အနွေးပေး (မီးကိုင်) ကြက်ငယ်များအတွက် ယင်းတို့၏ ထိလွယ်ခိုက်လွယ် သဘာဝ၊ ကြီးထွားနှုန်း "မြန်" ကာလ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု အထာမကျမှုများနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ စသည့် အခက်အခဲပြဿနာများအား ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။
1 -2ml/Lit နှုန်းဖြင့် သောက်ရေ၌ (5-7) Days တိုက်ပါ။
"အပူဒဏ်၊ဝမ်းပျက်သွေးပါအူနာဒဏ်နှင့် မှိုဆိပ်ကြောင့် ကာကွယ်နှုန်းကျဒဏ်" "အထူးကာကွယ်ဆေး"
Betaine, Vitamin C, Electrolytes (K, Na, Mg, Ca) နှင့် Menthol တို့ပါဝင်သည်။
(၁) အပူဒဏ်၊ ဝမ်းပျက်သွေးပါအူနာဒဏ်နှင့် မှိုဆိပ်ကြောင့် ကာကွယ်ဆေးအောင်နှုန်း
ကျဆင်းမှုဒဏ် (ဒဏ် ၃မျိုး) တို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ (Antistress)
(၂) Broiler များ၌ ရင်အုပ်ကြွက်သား (Breast muscle) ပိုမိုကြီးထွားစေပြီး ကြက်များ
ခရီးဝေးသယ်ဆောင်ရာ၌ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျမှု (Weight loss)
နည်းပါးစေပါမည်။ "ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူ" နှစ်ဖက်လုံးကို အကျိုးပြုနိုင်သည်။
(၃) အထူးသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ (functional cells) အားလုံးတို့၏ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုနှင့်
တစ်စုံတရာအပျက်အယွင်း ရှိပါက အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြုပြင်ထူထောင်ပေးနိုင်မှု
(Rapid Turn-Over) နှင့် အထူးသဖြင့် သွေးဖြူဥ (WBC) တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးမှုတို့အရ ကိုယ်ခံစွမ်းအားနှင့် ကာကွယ်ဆေးအောင်နှုန်း တိုးတက်ရေးအပေါ် အထောက်အကူရစေပါသည်။
Preventive Dosage = 1 ml/1Lit Water- (3-5) Days
Control Dosage =2ml/1 Lit Water- (3-5) Days